Otu esi emepụta akaụntụ Outlook na-akwụghị ụgwọ site na nzọụkwụ | Akụkọ akụrụngwa
You chetara afọ ndị ozi? Chọpụta ụfọdụ millennials You maghị ihe m na-ekwu site na iji mkpụrụokwu ahụ bụ "Onye Ozi", mana afọ ole na ole gara aga, enwere ọfụma nke kacha mma bụ MSN nke Microsoft. Nakwa ọtụtụ afọ gara aga site n'oge mgbe anyị niile nwere email @hotmail, mana ọ bụrụ na ngalaba ahụ akọwapụtabeghị otu ụzọ ahụ dị ka otu n'ime ndị nọchiri ya, @ dị ndụ, ọ bụ site n'ịnọgide na-eji uru ahụ. N'ezie, ọ bụrụ ugbu a anyị chọrọ inwe otu nnabata ozi nke si Microsoft ka anyi mara otu esi emepụta akaụntụ Outlook.
N'ịga n'ihu na akụkọ ntolite, afọ ndị gara aga, Outlook bụ akwụkwọ ozi, kalenda na ngwaọrụ ndetu, dị ka a ga - asị na ọ bụ isiokwu, nke Microsoft gụnyere tupu ịhapụ Windows 3.11. Ogologo oge ka e mesịrị, ọbịbịa nke Gmail mere ka ọtụtụ ndị ọrụ tinye ndụmọdụ Microsoft ma malite iji nke Google, yabụ ụlọ ọrụ Satya Nadella na-agba ugbu a kpebiri inye nke ha ihu ọhụụ. Ihe si na ya pụta bụ nke ama ama: Skype dochiela ozi na Outlook bụ "ihe ọhụụ ọhụrụ." N'isiokwu a anyị ga-akọwa ozi ọma nke Microsoft webatara mgbe ị na-eme mgbanwe kachasị ọhụrụ na nke kachasị mkpa, ị ga-amụta otu esi mepụta akaụntụ na Outlook n'efu.
1 Otu esi emepụta akaụntụ na Outlook n'efu
2 Nhọrọ menu Outlook
3 Otu esi ehichapụ akaụntụ Outlook
Otu esi emepụta akaụntụ na Outlook n'efu
N’ụzọ ezi uche dị na ya, ozugbo Hotmail fụchara, anyị ga-enweta ọrụ ọhụrụ ahụ site na ibe weebụ ọzọ. Iji zere mgbagwoju anya, m ga-akọwa ihe ndị m ga-eme mepụta akaụntụ na Outlook:
Anyị pịa EGO. Dị ka usoro ọzọ, ọ bụrụ na adreesị ahụ gbanwere, ịnwere ike ịnweta outlook.com ma tinye igbe ozi.
Anyị na-etinye aha na aha nna anyị *.
N'okpuru igbe "Aha njirimara", pịa "Nweta adreesị ozi-e ọhụrụ."
Ọ bụrụ n’achọ, anyị gbanwee ngalaba, nke anyị nwere ike ịhọrọ es (ọ bụrụ na ị mee ya na Spain), outlook.com o hotmail.com.
Anyị na-abanye paswọọdụ anyị ga-eji nweta akaụntụ anyị ga-ekepụta, otu ugboro iji hazie ya na oge nke abụọ iji gosi ya.
Anyi na-ewebata obodo anyi ma obu mpaghara anyi *, ubochi omumu * na okike *.
Anyị ga-ahazi ụzọ iji nwetaghachi paswọọdụ anyị. Ekwadoro m iji adreesị ozi-e ọzọ ka ị ghara inye gị nọmba ekwentị anyị. N'ezie, ọ bụrụ na ịchọrọ ihichapụ akaụntụ ma ọ bụ weghachite ya maka furu efu paswọọdụ gị, ị ga-eji email ma ọ bụ ezigbo ekwentị.
Ugbu a, anyị ga-ekwenye na anyị abụghị robot, yabụ anyị ga-ede ederede anyị hụrụ na onyogho dị na igbe ahụ. Anyị nwere nhọrọ nke ịgbanwe ya n ’ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Anyị nwere ike ikwe ka ezitere anyị onyinye nkwado, mana ana m akwado ịghara ịlele igbe ahụ. Echere m na ọ bụrụ na m chọrọ ihe, m ga-elekọta ịchọ ya. Achọghị m ozi mail na-achọghị.
Anyị pịa «Mepụta akaụntụ».
Ugbu a, anyị pịa igbe nwere igbe itoolu wee pịa Outlook.
N'ikpeazụ, anyị na-egosi asụsụ anyị, oge oge anyị wee pịa "Chekwa".
(*) Ọ dịghị mkpa itinye ezigbo data.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, na ọ bụ ya mere m ji kpọọ aha Gmail n'ihu, Outlook interface ka mma a otutu jiri ya tụnyere ihe ochie Hotmail na ọ bụ nnọọ kensinammuo. N’akụkụ aka ekpe anyị nwere Igbe mbata, Spam (nke ọbụla nwere nhọrọ iji wepu aha na ndị ahịa email ndị ọzọ enweghị), drafts, ihe ezigara na ihe nchekwa ehichapụ, yana Skype Ndi ana-akpo. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmepụta folda, anyị na-efegharị n'elu ederede "Nchekwa", anyị pịa akara ngosi gbakwunyere na-egosi (+) ma anyị tinye aha na igbe ga-egosi n'okpuru folda dị. Site na "Ọhụrụ", anyị nwere ike ịmepụta email ma ọ bụ, ọ bụrụ na anyị pịa obere akụ, mmemme kalenda.
Nhọrọ menu Outlook
Site na menu nhọrọ Outlok anyị nwere:
Mmelite, imelite ozi.
Nzaghachi akpaaka. N'oge a na-ede akwụkwọ a, agbanyụrụ ya, mana ọ ga-aza ịzaghachi ozi ịntanetị maka anyị (enweghị m mmasị na nke a ma ọlị).
Ntọala ihuenyo O ga enyere anyi aka ichikota otu anyi choro ihu igbe ozi.
Jikwaa plugins, iji jikwaa ụfọdụ ọrụ Microsoft.
Hazie offline, iji nwee ike iji akụrụngwa mgbe anyị ejikọghị na ịntanetị.
Gbanwee isiokwuEchere m na nke a doro anya. Ọ bụ ịgbanwe isiokwu nke igbe mbata anyị na ọrụ ndị ọzọ.
nhọrọ, iji hụ nhọrọ niile maka Outlook na ọrụ Microsoft ndị ọzọ. Enweghị ihe jikọrọ akaụntụ Microsoft ahụ ebe a.
Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ịgbanwe ihe oyiyi nke profaịlụ anyị, anyị ga-pịa akara ngosi dị n’elu aka nri, họrọ «Dezie profaịlụ» wee pịa Change foto, site na ebe anyị nwere ike ịhọrọ foto anyị ma bulite ya.
Otu esi ehichapụ akaụntụ Outlook
Ọ bụrụ na, na agbanyeghị ihe kpatara ya, ikpebie na ị chọghị iji akaụntụ Outlook gị ọzọ, ị ga-emechi akaụntụ ahụ niile, yabụ ugbu a anyị agaghị enwe ike ịnweta ọrụ Microsoft ọ bụla site na akaụntụ ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe ịchọrọ, ị ga - agbaso usoro ndị a.
Ka anyị gaa njikọ maka Mechie akaụntụ.
Ọ bụrụ na a gwara anyị ka anyị banye ma ọ bụ nyochaa akaụntụ anyị, anyị na-agbaso ntuziaka ndị ahụ.
Ọ ga-arịọ anyị ka anyị gosi na anyị bụ ndị anyị. Ọ bụrụ na anyị tinye email, anyị ga-egosi ozi email anyị na-ahazi. Ọ bụrụ na ọ bụ ekwentị, anyị ga-agwa gị ha ga-ezitere anyị koodu ahụ na ekwentị.
Nzọụkwụ ọzọ ga-abụ ịlele ihe ha zitere anyị ma tinye koodu ahụ (nke m na-enweghị ike ịme n'ihi na akaụntụ email m ahazi maka ntuziaka a bụ ụgha. Ihe "site na aka".).
N'ime "Họrọ ihe kpatara" ndepụta ndọtị, anyị na-ahọrọ ihe mere anyị ji chọọ imechi akaụntụ ahụ. Ọ bụrụ na anyị achọghị igbu oge, anyị nwere ike ịhọrọ otu n’otu ntabi anya.
N'ikpeazụ, ọ ga-akpọrọ anyị na windo ọhụrụ nke anyị ga-akwado na anyị chọrọ ihichapụ akaụntụ anyị site na ịpị "Akara akaụntụ mechie".
You nwere ajụjụ ọ bụla gbasara otu esi emepụta akaụntụ Outlook?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Otu esi emepụta akaụntụ Outlook
onye ozi javier zambrano dijo
Enwere m egwu
Zaghachi maiker javier zambrano
Otu esi echekwa ndụ nke ekwentị gị mgbe ọ nwetara mmiri